Raysulwasaaraha dalka Suudaan oo ka badbaaday isku day dil - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeAfricaRaysulwasaaraha dalka Suudaan oo ka badbaaday isku day dil
March 9, 2020 Puntland Mirror Africa, World 0
Raysulwasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdok. [Sawir Hore]
Khartoum-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdok ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala beegsaday kolonyo la socotay maanta oo Isniin ah gudaha caasimada Khartuum, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, oo soo xiganaysa taleefishinka dowladda Suudaan iyo ilo-wareedyo golaha wasiirada katirsan.
Hamdok, kaasoo loo doortay madaxa dowlad kumeelgaar ah kadib markii Meesha laga saaray hoggaamiyihii mudada dheer talinayay Omar al-Bashir sanadkii hore, ayaa loo qaaday meel amni ah qaraxa kadib, sida uu tabiyay TV-ka dowladda.
Sawiro lagu daabacay warbaahinta maxaliga ah iyo baraha bulshada ayaa muujiyay kolonyada oo ay kamidyihiin dhowr gaari cad oo nooceedu yihiin SUV iyo kuwo kale oo si xun waxyeelo u soo gaartay.
Gaariyaal qaraxa ku waxyeeloobay. [Isha Sawirka: Twiiter]
Goobjoogayaal ayaa Reuters u sheegay in weerarku uu ka dhacay meel u dhow waqooyiga laga soo galo buunada Kober, taasoo isku xirta waqooyiga Khartoum iyo bartamaha magaalada, halkaas oo uu kuyaal xafiiska Hamdok.
Kolonyada ayaa u muuqata in laga bartilmaameedsaday korka, wararka ayaa intaas ku daray.
May 9, 2020 WHO oo ka digtay in 200,000 ay coronavirus ugu dhiman karaan gudaha Afrika
February 27, 2019 Muhammadu Buhari oo markale loo doortay madaxweynaha Nayjeeriya
March 10, 2019 Diyaarad ay leedahay Ethiopian Airlines oo burburtay
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dib uga bilaabmatay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Puntland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dib uga bilaabmatay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland. Bartamihii bishii lasoo dhaafay ayaa digteero kasoo [...]
Puntland oo sheegatay masuuliyada weerar ka dhacay magaalada Laascaanood
Laascaanood-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegatay masuuliyada weerar lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada Somaliland ku leeyihiin magaalada Laascaanood, guddoomiyaha gobolka Sool Abuukar Cabdiraxmaan Geele ayaa warbaahinta u sheegay maanta oo Axad ah. Guddoomiyaha ayaa sheegay in [...]